Biyya alaa keessa ta’anii seenaa ofii odeessuun qabsoo Oromoo tiif bu’aa malii qabaa …? – Welcome to bilisummaa
Biyya alaa keessa ta’anii seenaa ofii odeessuun qabsoo Oromoo tiif bu’aa malii qabaa …?
bilisummaa July 2, 2015	2 Comments
Marii qabsaawota WBO duranii fi haayyota keenya waliin taasifne isa xumuraa BB-Show 2015
Previous Kitaabootni Afaan Oromoo eessatti gurgurama?
Next Ummata Oromootu hooggantoota dhaabbilee siyaasaa akka tokkooman kadhachuu qabamoo, hooggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromootu tokkummaaf ummata Oromoo kadhachuu qaba?
Gareen sagaggaalummaafii iftuulummaan ummata oromoo keessatti beekamu maqaa qabsootiin sabboonota ifgodhuufii faana balleefachuuf gara soshal mediatin ofdhadhessa jira. Akkuma beekkamutti gareen maqaa ABOtin biyya sweden kessa madheffate kanjiru yemmuu ta’uu warra rakkoo oromoon biyya Abbaa isaa irra ittiin baqatee kolugaltumma gaafatutti dhimma bahee dantaa sagaggaalummaa isaaniitiif oolfatudha kanaqofaami walgahii qabsoof jedhamtee godhamtu hundarratti Shamarran miseensota dhaabaa hunda ishee Abbaa manaa qabduufii isheenqabne sagaggaalummaaf bayya’atuudha. Jarri kun warra yeroo baqattooni oromoo biyya kana seenaan itti dhaqanii xalahaa degarsaa gaafatan shamarran dura akka isaan wajjiin sagaggaaltu godhatan yoodidde akka deegarsa wahiitu hin arganne godhu fakkennaf gazexessitun tv ethiopia damee afaan oromoo kessa hojata kanturte ammayu sababii warraatiin rakkacha jirti ishen wa’ee kanaa irratti akka waangootu wal’aalte warra maqaa oromootiin daldalu kanaan bo’aa jirtus beekamadha. Kana qofaami namni isaan nama hoorii hinqabneef akka deegarsa wahiitu hingoone irratti murteesan namoota bayyetu jira kannin kessa namni maqaan balcha jedhamu sababii qarshi isaaniif kaffaludhabeen xalachi dhorgatamee hara’ale rakkachajira Kanaan hayyota qabsooftuu godhanii ummatan sobuf yaaludha. warri garee kana irra bu’aa mataa isaniif jedhani jaratti sagaggaaltudhan tana maqaa isaani tolchuuf figan kunnin akkuma mamkaan oromoo jedhe odoo haatu haatu albee ofiin qaltu baafte jedhan santaati. Garbiraatiin namni hayyuu oromoo jedhamee lakkofsa duraa irrakayyame kuniini beekaa dhugaa kan oromoota kutaalee oromiyaa biraatiin nu warri godaa irra dhufne warra barumsaan beekame nama keena dhiisa’aa harreen teennalleen kudhalama xumurtu malee hin fe’amtu jedhee ummata oromoo kutalee biraati nama dhaadatuudha akkanaan hayyuu keenna ta’eejira jechuudhaka. Gama ibaatiin sababiin walga’icha kana godhataniif warra hinbishaane ofkeesa haxawanii baasuuf haalamijefataa akka jirtu dubatama jira. kuniis akkuma beektaniti sadarkuma dhaabattu akka isaan kun jalaa ol ajajaniif warren isaan danqan maraayyu of afo’oo kaasuf mariiti jiraachuu isanitu himama kun kan irrat xiyefate warra bahaa hujiin ala taasisuudha jedhama. Kunis konyaleefii kutalee irra jalqabee haga abbaa jaarma’aa Oboo Odaa xasee of afo’oo kaasuti deemuuf jira kuniini yeroo iti kennu hinqabnu jechuudhan akka shirigud jechaa jiratu dubatama. Maraafu wamafedhees ta’uu waliin dhageena.
Yaa doofaa yoo of sirreessuu baattan warri hujii hin beekne Odaa xasee dhiisii Bultum Biyyoo iyyuu karaa irraa maqsina ,hoggani barcaa qaamanii abjuu odeessuu seetanii utuu nama hogganuu dhiisii if hoganuu beektanii maaf ijoollen Dhihaa Galasaa kaasee hanga gadiitti, Harargee keessatti dhumu? hin dagatnu warra isin diinatti barcaan gurgurattan akka Gammachiis Dhaabaa fi KKF isin tahatii warra barate infaa, fi oduu keessan odeysa. isin warra iccitii barcaan jijjiiruu dha maaf of irranfattu Ejjenno hin qabdan ,fageessitanii yaaduu hin danddeessan, sansakkaa hin qabdan, tartiiba fi obsa hin qabdan yoo hoggana ykn aangoo kana isinitti kennan eessan geessu? raatuu fi munfqni qofti kun dhaqqaa somaleef haskaraa iyyaal al haraam ilmoo haramaa qofti jechuudha sagagalaa naman jechuu dura abba irraa dhalatn baraa.isin ilman aderraniin wal yaabu mitii obbolaan halala jechaa shawaxin tuuf,akka nama dubbatuu feetu ammoo
Leave a Reply to Dafaa Nagaroo Cancel reply